Dib-u-noqoshada iyo xaqa ka-noqoshada - Hanukeii
Isticmaalaha ayaa ku laaban kara HANUKEII, badeecad kasta oo soo bandhigta cillad soo-saaris. Iyadoo la tixgelinayo nooca badeecadaha qandaraaska la galay, Adeeggu wuxuu lahaanayaa muddo hal bil ah oo uu kula xiriirayo HANUKEII la'aanta ah waafaqid iyaga la. Haddii muddadan dhaaftay, wixii waxyeelo ah waxaa ku dhici doona Adeeggu.
Si rasmi ah loogu soo celiyo soo celinta, Adeeggu waa inuu la xiriiraa HANUKEII muddo bil gudaheeda ah, cinwaanka cinwaanka @ hanukeii .com, oo muujinaya sheyga ama alaabada la soo celin doono, kuna lifaaqan sawir iyo liis faahfaahsan oo ciladaha laga dhex helay
Mar HANUKEII uu ka helo xiriirinta Adeegga, wuxuu kugu wargalin doonaa 3-5 maalmood oo shaqo gudahood haddii aad soo celinaysid iyo in kale. Lacala soo celintu wey socotaa, HANUKEII Waxay u tilmaami doontaa Isticmaalaha habka loo ururiyo ama loogu diro sheyga cilladaysan xafiisyadooda / bakhaarradooda.
Alaab kasta oo la soo celinayo waa inay noqotaa mid aan la adeegsan oo ay lasocoto dhammaan calaamadaha, baakadaha iyo, meeshii ay ku habboon tahay, dukumiintiyada iyo walxaha asalka ah ee la yimid. Haddii Isticmaalaha uusan sidan ku sii wadin, HANUKEII wuxuu xaq u leeyahay inuu diido soo celinta.
Marka sheyga la helo oo cilladaha la caddeeyo, HANUKEII Waxay siin doontaa Isticmaalaha suurtagalnimada in badeecada loogu beddelo mid kale oo astaamo isku mid ah, haddii ikhtiyaarkan uusan si macquul ah u suuroobi karin ama aan loo dhigmin HANUKEII.
Keenista sheyga oo leh astaamo isku mid ah ama qaab cusub oo uu Isticmaalahagu doorto, sida ku habboon, waxaa lagu sameyn doonaa 3-5 maalmood ee soosocda laga bilaabo taariikhda HANUKEII Isticmaalaha ayaa xaqiijin doona beddelka badeecada cilladaysan ama keenista qaabka cusub.
Haddii Adeeggu joojiyo heshiiska, HANUKEII waxay fulin doontaa soo celinta lacagta oo dhan ee lasiiyay Macaamiisha si ay ugu iibsato alaabada cilladaysan.
HANUKEII wuxuu ogeysiiyaa Users in muddada soo celinta xaddiga la bixiyay ay ku xirnaan doonto habka lacag bixinta ee Isticmaalaha uu adeegsan lahaa markii la iibsanayo sheyga.
Si kastaba ha noqotee, Isticmaaluhu waa inuu qaataa qiimaha tooska ah ee soo celinta HANUKEII, inaad ku soo celiso amarka oo dhan amase aad go’aansato inaad soo celiso qaar ka mid ah alaabooyinka amarkii.
Si rasmi ah loogu soo celiyo, waa inaad la xiriirtaa HANUKEII cinwaanka cinwaanka @ hanukeii .com, adoo diraya foomka ka noqoshada oo dhameystiran oo la socda Shuruudaan iyo Shuruudaha sida LIFAAQA 1. Marka la helo isgaarsiinta la yiri, HANUKEII Waxay tilmaamaysaa habka loo diro amarka xafiisyadeeda ama bakhaarradeeda.
HANUKEII mas'uul kama ahan shirkadda xawaaladda ee uu Adeegsaduhu kireynayo inuu soo celiyo amarka. Dareenkan, HANUKEII wuxuu kugula talinayaa Adeegga in uga baahan shirkadda isuduwaha inay ku siiyaan caddeyn keenis mar haddii uu odergu ku keydinayo sheyga xafiiska HANUKEII, si Adeeggu u ogaado inuu badeecada si sax ah loogu geeyay HANUKEII. HANUKEII mas'uul kama aha cinwaanka uu Adeeggu ku soo diray dalabka soo celinta. Waa inay had iyo jeer noqotaa xafiiskayaga marka loo eego arrinta Yurub. Hadaannan haysan xaqiijin keenis hadana adeegsiguna uusan soo bandhigin risiidhada gaarsiinta, HANUKEII mas'uul kama aha khasaaraha oo waxay noqon laheyd isticmaaleyaasha lahaa sheegashada shirkadda gaadiidka ee qandaraas gashay.
Sheyga waa in aan la adeegsan oo ay ku jiraan dhammaan sumadaha, baakadaha iyo, meeshii ay ku habboon tahay, dukumiintiyada iyo walxaha asalka ah ee la yimid. Haddii Isticmaalaha uusan sidan ku sii socon ama haddii sheygu waxyeelo soo gaarey, Isticmaaluhu wuxuu aqbalayaa in badeecada ay ku dhici karto qiimo dhimis ama in HANUKEII soo laabashada waa la diidi karaa.
Mar HANUKEII hubi in amarku uu wanaagsan yahay, HANUKEII way sii socon doontaa si ay u soo celiso wadarta lacagta ay isticmaaleyaashu bixiyeen.
Haddii Adeeggu go'aansado inuu si buuxda u soo celiyo amarka, HANUKEII wuxuu ku celin doonaa Adeegga dhammaan qaddarka uu ku bixin lahaa oo haddii uu soo celiyo wax ka mid ah alaabadaas, kaliya qeybta u dhiganta alaabadaas ayaa la soo celin doonaa.
HANUKEII wuxuu ogeysiiyaa Users in muddada soo celinta xaddiga la bixiyay ay ku xirnaan doonto habka lacag bixinta ee Isticmaalaha uu adeegsan lahaa markii la iibsanayo sheyga. Sikastaba, HANUKEII soo celin doonaa lacagaha la bixiyay sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan, 14 maalmood gudahood ka dib taariikhda alaabada la soo celiyay la helay.
HANUKEII ma qirayo isbeddelka u dhexeeya sheyga uu soo gatay Isticmaalaha shey kale oo lagu bixiyo Websaydhka.